သားသမီးတို့အဘို့ကာကွယ်ဆေး: လူငယ်ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက် | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
အမေရိကရှိကလေးများ, ကလေးတွေကိုပုံမှန်ကျန်းမာသူတို့ကိုစောင့်ကူညီရန်ကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိ. ကလေးများကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်အခါဆရာဝန်များနှင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များသူတို့နောက်ကိုလိုက်ရာတိကျတဲ့အချိန်ဇယားဖွံ့ဖြိုး. ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ရောဂါအခမဲ့နေဖို့ကူညီပေးသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသင်တို့၏သားသမီးအချိန်ပေါ်တွင်သူတို့ကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်.
ဒီ website သငျသညျကလေးမြားအတှကျကာကွယ်ဆေးဆရာဝန်များအားဖြင့်အကြံပြုထားတဲ့ပြောထားသည်. ဆရာဝန်များကသူတို့ကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိသင့်ကြောင်းယုံကြည်လာသောအခါဒါဟာအစသင်အသက်အရွယ်ကိုပြောတယ်. သူတို့ထဲကအတော်များများဟာအစောပိုင်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ဘဝအတွက်ပေးသင့်. သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက် Read နှင့်သင့်ဆရာဝန်ကိုမေး.
ကလေးများကနျြးမာရေး ကလေးတွေ '' ကျန်းမာရေး-related အကြောင်းအရာများအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုမိဘများနှင့်လေးတွေများအတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သတင်းအချက်အလက်များအတွက် "မိဘများအတွက်" အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link ကိုလိုက်နာပါနဲ့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ. သင်သည်သင်၏ကလေးသည်အတွက်ပုံမှန်တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, ဘုံကလေးဘဝရောဂါများ, အများကြီး, အများကြီးပို.
Ethnomed ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့ကြရသောကလေးသည်ကျန်းမာရေး-related အရင်းအမြစ်များအများအပြားရှိပါတယ်. အထူးသဖြင့်, ကလေးငယျမြား၏မိဘများကလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုဖတ်ချင်စခွေငျးငှါ တစ်ဦးက New နိုင်ငံအတွင်းရှိကလေးများပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း: သရုပ်ဖော်ပုံလက်စွဲစာအုပ်. ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်မိဘအုပ်ထိန်းဖို့ကောင်းတစ်ဦးနိဒါန်းဖြစ်ပါသည်.
ဆယ်ကျော်သက် '' ကျန်းမာရေး
ဆယ်ကျော်သက်များ၏အသက်အရွယ်အကြားလူငယ်များဖြစ်ကြသည် 13 နှင့် 19. အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးတစ်ဦးရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောကာလများမှာ. ကလေးများအပျိုဖော်ဝင်ဝင်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်ရသောအရေးကြီးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုရှိပါတယ်. ဤသည်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများလိင်ရင့်ကျက်ဖြစ်လာသည့်အခါကာလဖြစ်ပါသည်. အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်း, ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့အလောင်းတွေဟော်မုန်းကိုခေါ်ဓာတုပစ္စည်းလွှတ်ပေးရန်. သူတို့ကအဖြစ်ကောင်းစွာစိတ်ခံစားမှုပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေ.
Puberty101 အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်မှဖြစ်ပျက်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
Bodimojo ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ရေးထားသမျှသော website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အာဟာရနှင့်ဆက်စပ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်များအကြောင်းကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်, လူမှုရေးဘဝ, နှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပိုပြီး.
Kidshealth ကိုလည်းထံအပ်နှံသောကသူတို့ရဲ့ website သို့တစ်အပိုင်းရှိပါတယ် ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးကိစ္စများ.
ဝန်ဆောင်မှု အင်တာနက်ကိုဖြတ်ပြီးကနေဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်များတစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါသည်. ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များလေ့လာစူးစမ်းဖို့အောက်က link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထံမှ, ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရမှ, မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုမှ.